एमालेले नमानेपछि डा. केसीको ज्यान जोखिममा, एमालेसँगको वार्ता असफल – Online National Network
एमालेले नमानेपछि डा. केसीको ज्यान जोखिममा, एमालेसँगको वार्ता असफल
राजेन्द्र पाण्डेले मनमोहन अस्पताल सरकारलार्इ बेच्न मानेनन्
३० श्रावण २०७४, सोमबार ०१:३५
काठमाडौं, ३० साउन –डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले एमालेसँग सुरु गरेको वार्ता विफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरुको लगानीमा खुलेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज सरकारले किनिदिएर डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न गरेको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ ।
ओलीले आफू मुस्ताङमा रहेकाले मनमोहन कलेजबारे पाण्डेसँग कुरा गर्न भने। देउवाले बैठककै बीचबाट पाण्डेसँग कुरा गरे। ‘डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएकाले उनको माग सम्बोधन गर्न मनमोहन अस्पतालको पूर्वाधार राज्यले खरिद गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखे। मनमोहन मेमोरियल अस्पताल सरकारले किन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले अस्वीकार गरेपछि अब ‘सम्बन्धनमै रोक लगाएर नयाँ मेडिकल कलेजको बाटो बन्द गर्न’ खोजिएको छ।
‘सम्बन्धित पक्षले आफ्नो सम्पत्ति बेच्दिनँ भनेपछि राज्यले अब जबर्जस्ती गर्ने कुरा आउँदैन,’ वार्तामा माओवादी तर्फबाट सहजकर्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलेअनलमइन सँग भने, ‘अब हामीसँग केसी अनसन टुंगोमा पुर्याउने एउटै उपाय छ– सम्बन्धमा कडाइ गरेर नयाँ मेडिकल कलेज छिर्न नदिने।’
यही बुँदामा डा. केसीलाई मनाउन प्रयास भइरहेको उनले बताए। ‘हामीले कुरा गर्यौं, उहाँ राजी हुनुभएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘भोलि पनि सम्बन्धित पक्ष सबैसँग कुरा गर्नेछौं।’